टेक्नोलोजी एक बिट तल धीमा छैन ... एर फ्लप! | Martech Zone
टेक्नोलोजी एक बिट डाउन गरिरहेको छैन… ईर फ्लप!
बिहीबार, मे 28, 2015 बिहीबार, मे 28, 2015 Douglas Karr
गोर्डन ई। मूर इंटेल र फेयरचिल्ड सेमीकन्डक्टरका सह-संस्थापक थिए जसले paper० बर्ष पहिले एउटा कागज लेखेका थिए जुन प्रति वर्ष एकीकृत सर्किट प्रति घटकको संख्या दोब्बर हुने भविष्यवाणी गर्दछ। १० वर्ष पछि, १ 50 10 मा, उनले प्रत्येक २ बर्षमा पूर्वानुमानलाई संशोधित गरे… र उनको पूर्वानुमान धेरै हदसम्म सहि रहेको छ। यो अब भनेर चिनिन्छ मूरको कानून.
एक उदाहरण प्रदान गर्न, Apple Watch (जुन म खुशीका साथ स्वामित्वमा गर्दछु र अत्यधिक सिफारिश गर्दछ) सँग लगभग २ आईफोन smart स्मार्टफोनको प्रशोधन शक्ति छ। यो टाढाको १24 को क्रे - २ सुपर कम्प्युटरलाई तपाईको नाडीमा प्रदर्शन गर्दछ। सम्पूर्ण उपकरणको पदचिह्न दिइएको त्यो उपलब्धी हो र गार्डन मूरले सोचे कि हामी आज हामी कहाँ छौंौं भनेर सोच्न मलाई गाह्रो लागेको छ।
कम्प्युटर चिप्सले आकार बढ्दै जाँदा प्रदर्शन वृद्धि गर्न जारी राख्यो, नवाचारहरूको लागि अनुमति दिई जुन ईन्जिनियरहरूले कहिल्यै सम्भव नै सोचेनन। Years० बर्ष पहिले, धेरै व्यक्ति विश्वास गर्दैनन् कि हामी चाँडै नै तपाईको हातको हत्केलाबाट असीमित जानकारीमा पहुँच गर्न सक्दछौं।
यो बजारहरु को लागी के मतलब हो? आईएमओ, यसको मतलब हामी क्रस-च्यानल मार्केटिंग अप्टिमाइजेसन र मार्केटि fore पूर्वानुमानको साथ पूरा गर्न सकिने कुराको शुरुमै चरणमा छौं। आधुनिक विश्लेषण प्लेटफर्महरू धेरै प्राथमिक छन् - डाटा को कब्जा र सरल रिपोर्टिंग प्रदान। ठूला डाटा प्रणालीहरूले मार्केटिंग उद्योगमा नवीनता लाई अगाडि बढाउँदै रिपोर्टि systems प्रणालीलाई भविष्यवाणी गर्ने ईन्जिनमा अग्रिम बनाउनका लागि अगाडि बढाइरहेका छन् - जसले दुबै प्रयोगकर्ताको अनुभव र मार्केटि results परिणामलाई सुधार गर्दछ।
प्रशोधन शक्ति महत्वपूर्ण छ किनकि यी असीमित प्लेटफर्महरूमा विकासको लागि उपकरणहरू बनाउन सजिलो र सजिलो हुन्छ। एउटा उदाहरण, वा कोर्स, ठूला डाटाबेस ईन्जिनहरू हुन्। आत्म-अनुकूलन डेटा र क्वेरी ईन्जिनहरू विकास गरेर, कम्पनीहरूले नयाँ सुविधाहरू निर्माण गर्न विकास श्रोतहरू धकेल्न सक्दछन् - अधिक प्रभावी ढ run्गले चल्नको लागि डेटाबेस ट्युन गर्न र ट्वीक गर्ने होइन। यो रमाईलो समय हो!
टैग: मूर कानूनप्रशोधन शक्ति
१ Marketing विभिन्न सर्तहरू मार्केटि Pla स्वचालन प्लेटफार्महरूमा प्रयोग गरियो
Online अनलाइन इन्फोग्राफिक निर्माता र प्लेटफार्महरू